Shirkadda Telesom oo $35,000 ugu Deeqday Mashruuca Caruurta Danyarta ah ee La Nool Xanuunka Macaanka | Haldoor News
Hargeysa – [Haldoor News]: – Shirkadda Isgaadhsiinta Casriga ah ee Telesom ayaa $35,000 ku wareejisay maamulka Cusbitaal Global Polyclinic, lacagtan oo ay shirkaddu ugu deeqdo xanaanaynta Caruurta la nool xanuunka macaanka oo ay shirkaddu maal-galinayso sanadkasta. Munaasibadda ay shirkaddu lacagta ku wareejinaysay ayaa ka dhacday xarunta cusbitaalka ee magaaladda Hargeysa.
Mid ka mid ah hooyooyina caruurtooda lagu xanaaneeyey cusbitaalka Global Polyclinic ayaa ka warbixisay mashruucan iyo sida ay bulshaddu uga faa’iidaysteen. Hooyaddan ayaa sheegtay inay laba hablood oo walaalkeed dhalay ay qabaan xanuunka macaanka. Hablahan ay ku nool yihiin miyiga, iyadoo cabiraysa dhibta ay kala soo kulmeen hablahan qaban caruurta macaanka ay tidhi, “Hablaha duruufaha aan la soo maray lagama sheekayn karo, aad baa la noogu dadaalaa, waanu nimaadnaa waa la nasiiyaan, waanu noqonaa. Waxa loo dhigaa ma jirto, aad baanu annaga xaggayaga, Allaha ha taageero, dadweynahayagaa, raggayagaa noo jooga iyo shirkadayaddaa Allaha ha barakeeyo